ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဟိုက်လပ်စ်များ | တိုယိုတာဟိုက်လပ်စ်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Off-Road Vehicle / Suv (75)
Lks 300 လက်ရှိဈေးနှုန်း
White Toyota Hilux vigo 2012 diesel 2.5 ရင်​ခွဲ....ygn 1J လိုင်​စင်​ ကားအလွန်​သန့်​ 095014186
Toyota Hliux Surf 2003
Silver Toyota Hliux Surf 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Black Toyota Hilux Vigo 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Lks 440 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Hilux Surf 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Silver Toyota Hilux Vigo 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Lks 237 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Hilux Surf 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Lks 468 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Hilux Surf 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Purple Toyota Hilux Surf 1996 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl Gold Toyota Hilux Vigo 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလ...
Silver Toyota Hilux Surf 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl White Toyota Hilux Surf 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်း...
Silver Toyota Hilux Vigo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Black Toyota Hilux Vigo 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Blue Toyota Hilux Surf 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl White Toyota Hilux Surf 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်း...
Lks 218 ညှိနှိုင်း
Green Toyota Hilux Surf 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Silver Toyota Hilux Vigo 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Toyota Hilux Extra cab ( Revo ) 2017
Pearl white Toyota Hilux Extra cab ( Revo ) 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Ste...
Black Toyota Hilux Vigo 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Pearl White Toyota Hilux Vigo 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,A...
Silver Toyota Hilux Vigo 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Red Toyota Hilux Surf 1995 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: P...
Grey Toyota Hilux Vigo 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
Pearl White Toyota Hilux Vigo 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,A...
Black Toyota Hilux Vigo 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
Blue Toyota Hilux Surf 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Black Toyota Hilux Vigo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြံ...
ပစ်ကပ်ထရပ်တွေထဲက နာမည်ကြီး တိုယိုတာ ဗီဂိုထရပ်များ
တိုယိုတာ ဘရန်ဟာ ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများတဲ့ကား ဘရန်တစ်ခု ဖြစ်သည့်နည်းတူစွာ ပြည်တွင်းရဲ့ ရွေးချယ် ၀ယ်ယူစီးနင်းကြတဲ့ ပစ်ကပ် ဘရန်ကားတွေထဲ တိုယိုတာ ဗီဂိုကို ထင်ရှားစွာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းနဲ့ ရုန်းအားကောင်းတဲ့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကြီးတွေကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ တစ်ခန်းတွဲ ပစ်ကပ်တွေကိုလည်း ၇နိုင်သလို နှစ်ယောက်ထက်ပိုတဲ့လူတွေကို အမိုးအကာနဲ့ လုံခြုံစွာ စီးနိင်စေဖို့ တစ်ခန်းခွဲဖြစ်တဲ့ လေးယောက်စီးကားတွေကို အမျိုးအစားကွဲတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အရှေ့က လေးယောက်စီး အနောက်က ပစ်ကပ်ဒီဇိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်ပြီးကြံခိုင်မှုတစ်ရပ်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အနေနဲ့ နှစ်ခန်းခွဲ တိုယိုတာ ဗီဂို တစ်ရပ်တွေကိုလည်း ထုတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း တွင်ကျယ်စွာနဲ့ အသုံးပြုပြီး အမှာယူများတဲ့ ဘရန်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပထမမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ဗီဂိုရဲ့ ပထမမျိုးဆက်တွေကို ၁၉၆၈ ကတည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ မျိုးဆက်တွေကိုတော့ မျိုးဆက် (၇) ဖက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၅ ကနေ ယနေ့ထိ ထုတ်တဲ့ ဘရန်တွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို မျိုးဆက်တွေကို ထုတ်တာက အာဂျီတီနား၊ ဗဲနီဇွဲလားနဲ့ ပါကင်စတန်တို့မှာ ထုတ်ပြီး တရုတ်နဲ့ အခြား နိုင်ငံတွေမှာ ရောင်းချ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းကို တိုယိုတာ ဗီဂိုတွေကို အများဆုံး ၀င်ရောက်တာက ထိုင်းနိုင်ငံဖက်မှ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့အင်ဂျင်၊ နောက်ဘီးယက်၊ လေးဘီးယက်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၀ စီစီ၊ ၂၇၀၀ စီစီ၊ ၄၀၀၀ စီစီတို့ကို ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်မှာကတော့ ၂၅၀၀ စီစီ၊ အင်တာကူလာ ပါဝင်တဲ့ ၂၅၀၀ စီစီ နဲ့ ၃၀၀၀ စီစီဖြစ်တဲ့ အင်တာကူလား ဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဂီယာကို မန်နျူးယယ် (၅) ချက်၊ အော်တို မတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ ၄ (သို့) ၅ ချက် ဂီယာတွေကို ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံအလိုက်လည်း စွမ်းဆောင်ရည် ရရှိနိုင်မှု ကွာပါတယ်။ မလေးရှားဖက်က တိုယိုတာ ဟိုက်လပ်စ်တွေဆို တစ်ခန်းခွဲက လွဲရင်း ကျန်တဲ့ နှစ်ခန်းတွဲနဲ့ တစ်ခန်းတွဲကားတွေကို ၂၅၀၀ စီစီမှာ ၇ရှိနိုင်ပြီး နှစ်ခန်းတွဲတွေမှာတော့ အော်တိုမတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ ဂီယာတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်လိုင်း၊ ဆလင်ဒါ လေးလုံး၊ ၁၆ ဗီ၊ ဒီအိုအိတ်ခ်ျစီဖြစ်တဲ့ ဒီဇယ်တွေကို သုံးပါတယ်။ ထို အမျိုးအစား အစိတ်အပိုင်းတွေကို အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလည်း တူညီစွာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အော်ပို့ကတော့ အနည်းငယ်ကွာနိုင်ပါတယ်။ စင်ကာပူမှာကတော့ တစ်ခန်းတွဲ ဗီဂိုတွေနဲ့ နှစ်ခန်းတွဲ ဗီဂိုတွေကို ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခန်းတွဲကတော့ ၂၅၀၀ စီစီ ဖြစ်ပြီး နှစ်ခန်းတွဲကတော့ ၃၀၀၀ စီစီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ဗီဂိုတွေကတော့ ၄၀၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ခန်းတွဲနဲ့ နှစ်ခန်းတွဲတွေကို ရနိုင်ပါတယ်။ ဌင်းကိုတော့ မြင်းကောင်ရေ ၃၃၀ မှာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်က ဘယ်နိုင်ငံဖက်က ၀ယ်ယူတင်ပို့သလည်း ဆိုတာပေါ်မှုတည်ပြီး အင်ဂျင် စွမ်းဆောင်ရည်တွေက အနည်းငယ်ကွာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၅ကနေ စတင်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တိုယိုတာ ဗီဂိုတွေမှာ ဒီဇိုင်း မြင့်တင်မှု ကို ၂၀၀၈ မှာ ထပ်ပြီး မြင့်တင်ထားပါတယ်။ ၂၀၀၈ မှာကိုပဲ ဘယ်မောင်း တိုယိုတာ ဗီဂိုတွေကို ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ တိုယိုတာ ဟိုက်လပ်စ် ရဲ့ အီး ဂရိတ်နဲ့ ဂျီ ဂ၇ိတ်တွေမှာ ရှိတဲ့ တစ်ခန်းခွဲကားတွေ အားလုံးမှာ စမတ်ကပ်လို့ခေါ်တဲ့ အနောက်ဖက် အခန်းပို ရရှိနိုင်မှုကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရောင်းချမှု အတွက်သာ သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ မှာလည်း တစ်ခါ ပြန်ပြီး တိုယိုတာဟာ ဌင်းရဲ့ ဟိုက်လပ် ဗီဂိုတွေကို ပြန်ပြီး ဒီဇိုင်း မြင့်တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ အပြင်ဖက် ဒီဇိုင်းတွေ အပြင် အတွင်းဖက်တွေကို ပြောင်းလဲမြင့်တင်ခဲ့တဲ့ ပြီး မြင်းကောင်ရေ ၁၄၂ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ တာဗို့ ချာဂျာ ဒီဇယ်တွေပါ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးလည်း ဆီစား သက်သာလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂နှစ်ဆန်းလောက်မှာ တိုယိုတာက ဌင်းရဲ့ တိုယိုတာ ဟိုက်လပ် ဗာဂိုကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၃ မော်ဒယ်တွေ အဖြစ် ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဂီယာ (၄) ချက်ထိုးတွေကနေ ဂီယာ (၅) ချက်ထိုးတွေ အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲမြင့်တင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဌင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်း မြင့်တင်ခဲ့ပါသေးတယ် မြင်းကောင်ရေအား ၁၆၃ ကနေ မြင်းကောင်ရေအား ၁၇၁ ကို ပြောင်းလဲ မြင့်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဖက် နှစ်ခန်းတွဲ ထိုင်ခုံတွေအပြင် ကားရဲ့ အရှေ့ဖက် တွေကိုပါ မြင့်တင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ဗီဂိုတွေထဲမှာ အော်တို ဘရိတ် စနစ်၊ လေအိတ်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှုများ၊ အလိုင်းဝှီး၊ လျှပ်စစ် မှန်၊ လျှပ်စစ် တံခါးပေါက်၊ နှင်းခွဲမီးများ၊ ရီမုတ် လော့ခ်၊ စပေါ့ဘား၊ အရောင်နဲ့ မှန်များ၊ လေအေးပေးစက်၊ စီဒီ ပလေယား၊ ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ အင်ဂျင် တုန်ခါမှုကို ထိန်းချုပ်မှုများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၅ မော်ဒယ်ကနေ ၂၀၁၄ အထိရှိတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေကတော့ ကျပ်သိန်း ၃ ရာနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး ဈေးနှုန်းမှာ ကွာခြားသလို ကားဂ၇ိတ်ပေါ်မှာလည်း ဈေးနှုန်းကွာခြားပါတယ်။
တိုယိုတာ ဗီဂိုတွေဟာ ပစ်ကပ် ထရပ်အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပြီး ခန့်ညားတဲ့ အသွင်အပြင်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အတွက် မောင်းနင်းစီးနင်းဖို့ကောင်းမွန်တဲ့ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းနဲ့ ရုန်းအားကောင်းလှတဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေကလည်း မောင်းနှင်မှုမှာ လမ်းမရွေးသွားလာနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။